Kheladi - बार्सिलोना र स्पेनको आवश्यकता पेड्री, पेड्रीको आावश्यकता आराम
भदौ ११, २०७८ ०६:४५
काठमाडौँ, (खेलाडी)- पछिल्ला १२ महिना पेड्रीका लागि रोमाञ्चक रह्यो । दोस्रो श्रेणीको लास पाल्मसबाट बार्सिलोना पुगे । लियोनल मेसी र सर्जियो बुस्क्वेट्सलाई प्रशंसक बनाए । कोपा डेल रे जिते । अनि युरो २०२० मा स्पेनका लागि ‘डेब्यु’ गरे । ओलम्पिक खेल्न सुदूर पूर्वको जापान पनि पुगे ।
जसरी उनी १७ वर्षको उमेरमा बार्सिलोनाको सिनियर टिममा बढुवा भए, उस्तै रफ्तारमा स्पेनको राष्ट्रिय टोलीमा पनि पुगे । स्पेनको यु २१ टिमबाट खेलिरहेका पेड्रीलाई गत मार्चबाट लुइस एनरिकेले राष्ट्रिय टिममा समावेश गर्न थाले । त्यसपछि युरो अनि टोकियो ओलम्पिकमा रजत पदक, कति मिठो यात्रा रह्योे युवा मिडफिल्डरको ।
पेड्रीको कथा साँच्चै लोभलाग्दो छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने युवा पेड्री कति बलिया छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । विश्व फुटबलमा गत वर्ष उनले भन्दा बढी खेल कसैले पनि खेलेन । १८ वर्षिय खेलाडीले क्लब तथा राष्ट्रिय टिमका लागि यसरी अधिक संख्यामा खेल्न सक्नु अचम्मलाग्दो कुरा हो । यसले पेड्री शारिरीक र मानसिक रुपमा कति मजबुत छन् भन्ने देखाउँछ ।
पेड्रीका लागि सबै मौका फटाफट आइपुगे । एक वर्षअघि कसले सोचेको थियो र, पेड्री उत्कृष्ट ११ मा पर्नेछन् भनेर ? बरु उनले बार्सिलोनाबाट खेल्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने पो चिन्ता थियो । तर उनको वृत्ति विकासले नाटकीय लय समातेको छ ।
गत सेप्टेम्बर यता पेड्रीले ७७ खेल खेलेका छन् । तीमध्ये ५६ खेल बार्सिलेनाका लागि थिए । उनले ला लिगामा एउटा खेल पनि छुटाएनन् । त्यसपछि कोपा डेल रेमा नौं, अनि च्याम्पियन्स लिगमा सात खेल । स्पेनका लागि उनले २१ खेल खेले ।
यही अवधिमा पेड्रीपछि सर्वाधिक खेल खेल्नेमा बु्रनो फर्नान्डेज (७२), मेसन माउन्ट (७०) र एन्टोनी ग्रिजम्यान (६८) छन् ।
लास पाल्मसबाट जुलाई, २०२० मा मात्रै बार्सिलोना पुगेका पेड्रीको प्रतिभालाई रोनाल्ड कोम्यानले तत्कालै पहिचान गरे । त्यही भएर हुनसक्छ, पेड्रीले ‘डेब्यु’ सिजनमै ५२ खेल खेले । खेल संख्यामा उनलाई पछ्याउने खेलाडीमा ग्रिजम्यान (५१), बुस्क्वेट्स (५०) र जोर्डी अल्बा (४९) थिए ।
‘सबैभन्दा बढी खेल कसले खेल्ने ?’ नाम गरेको प्रतियागिता छैन । हुन्थ्यो भने पनि पेड्री जस्ता युवा खेलाडीको यसमा सहभागिता हुनु हुँदैन । पेड्रीले गएको १२ महिनामा जुन किसिमको खेल भार बहन गरे, यो स्वास्थ्य विज्ञानका विज्ञहरुको सुझावको विरुद्धमा छ ।
पेड्रीले स्पेनका लागि भने मार्च २५ मा ‘डेब्यु’ गरे, ग्रिसविरुद्धको खेलबाट । त्यस मैत्रीपूर्ण खेलपछि उनले विश्वकप छनोटका खेलहरुमा पनि मौका पाए । युरोमा त उनीभन्दा बढि समय मैदानमा रहनेमा रक्षक एयमेरिक लापोर्टे र गोलरक्षक युनाई सिमोन मात्रै थिए ।
खेलाडीहरुको संगठन छ, फिफप्रो । जसले खेलाडीहरुको शारिरीक र मानसिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्छ । उसले खेलाडीहरुलाई अत्याधिक खेलमा संलग्न गराउन नहुनेमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।
फिफप्रोले वार्षिक रुपमा करिव दुई सय खेलाडीको खेल ट्रयाक गर्छ र, उनीहरुले शारिरीक क्षमताले नभ्याउने प्रकारले खेल्नु परिरहेको छ कि भनेर अध्ययन गर्छ, रिपोर्ट निकाल्छ । अनि क्लब तथा खेलाडीलाई आवश्यक सुझाव पनि दिन्छ । फिफप्रोको रिपार्टका अनुसार सन ह्युङ मिनले २०१८-१९ सिजनमा टोटेनह्याम र दक्षिण कोरियाका लागि ७८ खेल खेलेका थिए ।
भनिन्छ पेड्री हतपत मैदानबाट बाहिर निस्कन मान्दैनन् । आफूलाई खेलको बीचबाट ननिकाल्न आग्रह पनि गर्छन् । तर उनको जोश र खेलाडीले पालना गर्नुपर्ने नियमबीच मेल छैन । फिफप्रो भन्छ, सिजन सकिएपछि कुनै पनि खेलाडीले कमसेकम चार साताको बिदा पाउनु पर्छ । सिजन चलिरहेकै बेला पनि एउटा खेलाडीका लागि दुई साताको विश्राम चाहिन्छ । किनभने खेलाडीको शरिरले चाहिएको जति आराम नपाए चोटको अधिक डर हुन्छ । अन्य किसिमका स्वास्थ्य समस्या पनि आउन सक्छन् ।
हुन त सबै क्लबमा खेल विज्ञान विभाग हुन्छ । तथ्यांक राखिन्छ । यसकारण यस किसिमको समस्याबारे ठूला क्लब बेखबर छैनन् । तर उनीहरुको चिन्ता र चासो खेल नतिजामा मात्र हुन्छ । फेरी समर्थकहरुले पनि खेलाडीलाई परिरहेको भारबारे कुरा उठाउँदैनन् । उनीहरु सोच्छन्, ‘खेलाडी अनुबन्ध गरेको, आकर्षक तलब दिएको खेलाउनका लागि त हो ।’
बार्सिलोना क्लबभित्रकै अध्ययनहरुले पनि थोरै समयमा धेरै खेल खेल्नु पर्दा खेलाडीले विविध समस्या भोग्नु परेको देखाएका छन् । उनीहरुले फिफप्रोको सुझाव अक्षरस पालना गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउने गरेका छन् ।
ओेलम्पिक दौरान पेड्रीलाई सोधियो, ‘खेल संख्या बढी त भएन ?’
‘बार्सिलोना जस्तो क्लब र राष्ट्रिय टिमका लागि खेल्न पाउनु मेरो अहोभाग्य हो । मेरोबारे चिन्ता लिइएको छ, मलाई लाग्छ यो सामान्य हो । ओलम्पिकपछि म केही समय आराम गर्नेछु,’ पेड्रीको उत्तर थियो ।
बढी खेल खेल्नु परेको, आरामका लागि समय नपाएकोमा पेड्रीले कुनै गुनासो गरेका छैनन् । तर स्थापित धेरै खेलाडीहरुले भने यसमा गुनासो गरेका छन् । गत डिसेम्बरमा रियाल मड्रिड र ब्राजिलका मिडफिल्डर कासिमिरोले खेलाडीहरु यन्त्र नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
‘हामीसँग आराम गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन । यति धेरै खेल खेल्नुपर्छ कि, पर्याप्त आराम पाउन असम्भव छ,’ रियालको प्रदर्शन खस्किएपछि आइरहेका आलोचनाको जवाफमा कासिमिरोले भनेका थिए ।
कासिमिरोका तत्कालिन प्रशिक्षक जिनेदिन जिदान पनि आफ्ना खेलाडीको तर्कसँग सहमत थिए । किनभने उनको टिममा चोटका कारण साह्रै समस्या परेको थियो ।
फिफप्रो भन्छ, ‘कुनै पनि खेलाडीले एक सिजनमा ५५ भन्दा बढी खेल खेल्नु हुँदैन ।’ तर यस किसिमको नियम लगाउन सम्भव छैन । किनभने क्लब र राष्ट्रिय टोलीका खेलहरुबीच सन्तुलन मिलाउन असम्भवप्राय छ । फेरी फिफा र उसको युरोपेली सहकर्मी युइएफएबीच प्रतिस्पर्धा छ, बढी भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउने । यसले पनि खेलाडीलाई मारमा पारेको छ ।
पेप ग्वार्डिओला, योर्गान क्लोप लगायतका प्रशिक्षकले पनि खेलाडीले अधिक खेल खेल्नु परेको बताउँदै आएका छन् । बार्सिलोनाकै कोम्यानले पनि फुटबल क्यालेन्डर असाध्यै जटिल रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
हुन त कतिपय सिनियर खेलाडी धेरै दिन बिदामा रहन चाहँदैनन् । उनीहरु ठान्छन्, लामो बिदाका कारण साविकको फिटनेसस्तरमा फर्कन बढी समय लाग्छ । तर पर्याप्त आराम नपाए चोटको सम्भावना हुनेतर्फ चाहिँ उनीहरुले साचेको देखिँदैन ।
पेड्रीलाई लाग्न सक्छ, ‘आरामविना १२ महिना फुटबल खेल्न असम्भव छैन ।’ कैयौँ खेलाडीले पेड्रीकै जस्तो सोच्न सक्छन् । लगातार खेल्न सक्छन् । तर विज्ञान उनीहरुसँग सहमत छैन । गत सिजन पेड्रीले पर्याप्त आराम नै पाएनन् ।
पेड्रीले गत सिजन अन्तिम लिग खेल मे १६ मा खेले । त्यसको १५ दिनपछि उनी स्पेनिस राष्ट्रिय टोलीको अभ्यासमा सहभागी भइसकेका थिए ।
लियोनेल मेसीविनाको बार्सिलोनाले लिगको सुरुआत गर्दा पेड्री जस्ता प्रतिभाको आवश्यकता स्वभाविक हो । तर यी किशोरले आराम नपाएकाबारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । बार्सिलोनाकै पूर्व खेलाडी ग्यारी लिनेकरले पनि पेड्रीको चिन्ता गरेका छन् ।
जुलाई ६ मा स्पेन र इटाली युरो सेमिफाइनलमा भिडे । त्यसको एक सातापछि उनी टोकियो पुगे । अगस्ट ७ मा स्पेनले ओलम्पिक पुरुष फुटबलको फाइनल हा¥यो । घर फर्केको तीन दिनपछि पेड्री बार्सिलोनाको अभ्यासमा देखिए । अनि गत आइतबार रियाल सोसिडाडविरुद्धको खेलमा उनी पहिलो रोजाइमै मैदान उत्रिए ।
लगातार खेलिरहेका खेलाडीलाई खेलाउँदा टिमलाई सजिलो हुने तर्क कोम्यानको थियो । युरो र ओलम्पिक खेलेका एरिक गार्सियाको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘उनी लयमा छन् । लगातार खेलिरहेका छन् । उनको उपस्थितीमा बार्सिलोनाको टिम सन्तुलित हुन्छ,’
गार्सियाले पछिल्ला दुई प्रतियोगितामा पेड्री भन्दा कम समय मैदानमा बिताएका थिए । फेरी कोम्यानले पर्याप्त आराम पाएका क्लेमेन्ट लेगंलेट र रोनाल्ड अरौजोलाई भने बेन्चमा राखेका थिए ।
कोम्यान मात्र होइन रियाल सोसिडाडका प्रशिक्षक इमानोल आल्गुआसिलको विचार पनि यस्तै छ । किनभने ओलम्पिक खेलेका मार्टिन जुबिमेन्डी, मिकेल मेरिनो र मिकेल ओयारजबललाई उनले बार्सिलोनासँगको खेलमा सुरुबाटै खेलाए ।
ओयारजबलले पनि पेड्री जस्तै युरो र ओलम्पिक खेले । २४ वर्षिय स्ट्राइकरले पछिल्लो १२ महिनामा अत्याधिक खेल खेलेका छन् । उनले बार्सिलोनाविरुद्ध गत आइतबार फ्रिकिकलाई सोझै गोलमा परिणत गरे ।
‘यी खेलाडीहरु बाँकी भन्दा एकदमै फिट छन् । उनीहरु प्रत्येक खेल खेल्न चाहन्छन् । उनीहरु शारिरीक र मानसिक रुपमा तयार छन्,’ सोसिडाडका प्रशिक्षकले भने ।
तर युरो र ओलमिम्पक खेलेका सबै स्पेनिस खेलाडीको कथा उही छैन । टोकियोबाट फर्कने वित्तिकै भिल्लारियालको टिमसँग सुपर लिग खेल्न बेलफास्ट गएका पाउ टोरेस हाल बिदामा छन् । उनी सेप्टेम्बरको दोस्रो साता मात्र टिममा फर्कनेछन् ।
आरबी लाइपजिगबाट खेल्ने स्पेनिस विंगर डानी ओल्मोले क्लबका सुरुवाती दुई खेल खेलेका छैनन् । एथ्लेटिक बिल्बाओले गोरक्षक सिमोनलाई दुई साताका लागि बिदा दिएको छ । उनको स्थानमा २० वर्षिय युलेन आगिरेजेबालाले बिल्बाओको गोल पोस्ट सम्हालिरहेका छन् ।
आफूलाई आराम चाहिएको छ भन्ने कुरा पेड्रीलाई थाहा नभएको पक्कै होइन । उनलाई बार्सिलोनाले चाँडै बिदामा पठाउने अनुमान पनि गरिएको छ । बार्सिलोनालाई पनि के थाहा छ भने पुर्नजागृत पेड्री आफ्ना लागि थप प्रभावकारी सावित हुनेछन् । तर उनले बिदा कहिले पाउँछन् त ? प्रष्ट छैन ।
‘हामीले सिमोनसँग कुरा गर्‍यौँ । उनी पुनर्ताजगीका साथ फर्किउन भनेर छुट्टीमा जान सुझाइयो । उनी आफ्नो हिसाबले अभ्यासमा फर्कनेछन् । अनि जब फिट हुन्छन्, टिममा फर्कनेछन्,’ बिल्बाओका प्रशिक्षक मार्सेलिनो गार्सिया टोरलले भनेका छन् ।
गत आइतबार सम्पन्न सोसिडाडाविरुद्धको खेलपछि भोलिपल्ट उनले अभ्यासमा जानु परेन । तर मंगलबार भने उनी समयमै अभ्यासमा पुगे । जहाँ बार्सिलोनाले शनिबारको खेलका लागि तयारी ग¥यो । शनिबार बार्सिलोनाको भेट बिल्बाओसँग हुँदैछ ।
पेड्रीले बिदा पाउने वा नपाउने भन्ने विषय उनी आफैँ र प्रशिक्षक कोम्यानमा भर पर्ने बताइएको छ । तर सिजनको सुरुआतमा भने उनलाई जबरजस्ती गरिएको छैन । स्पेनिस खेलाडी संघलाई पनि पेड्रीले आफू बार्सिलोनासँग मैदानमा फर्कन तयार रहेको सन्देश दिएको बताइएको छ ।
बार्सिलोनाले पेड्रीलाई युरोपछि नै बिदामा पठाउने योजना बनाएको थियो । क्लबको मनसाय पेड्रीलाई ओलम्पिकमा नबोलाइयोस भन्ने थियो । तर बार्सिलोनाले पेड्रीलाई टोकियो जानबाट रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो । फेरि पेड्री आफैँ पनि ओलम्पिकमा भाग लिन उत्साहित देखिए ।
सेप्टेम्बरको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेक दौरान स्पेनले विश्वकप छनोट खेल्ने तालिका छ । बार्सिलोना चाहन्छ, पेड्री र गार्सियालाई इनरिकेले राष्ट्रिय टिममा नबोलाउन् ।
पेड्रीले गत सिजन चोटका कारण कुनै पनि खेल गुमाउनु परेन । तर पर्याप्त आराम नपाउने र लगातार खेलिरहनु पर्ने भएपछि पेड्रीले चोट बोक्ने सम्भावना बलियो बन्छ ।
हुन त इनरिके आफैँले पनि पटकपटक युवा खेलाडीलाई ध्यानपूर्वक खेलाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर स्विडेन, जर्जिया र कोसोभोसँग हुने खेलहरुका लागि बलियो टिम बनाउनु पर्ने बाध्यतामा छन्, इनरिके । किनकी स्पेन विश्वकप छनोटको अघिल्लो खेलमा ग्रिससँग बराबरीमा रोकिएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा बार्सिलोना र स्पेन दुवैले मैदानमा अत्यन्तै मेहेनत गरेर खेल्ने आफ्ना प्रभावशाली सदस्य गुमाउनेछन् । अनि दुवै टिमले खेल्ने शैलीमा उनकै माग बढी हुने अवस्था छ । युरोमा पनि उनकै भरमा स्पेनले ‘पासिङ गेम’ खेलेको हामीले देखेकै हो ।
पेड्री लामो दौडका बलिया घोडा हुन् । उनको सावधानीपूर्वक उपयोग गरिए बार्सिलोना र स्पेनलाई दीर्घकालिन फाइदा हुनेमा दुईमत छैन ।
दुवै टिमका वर्तमान अनि भविष्य हुन्, पेड्री । क्लब र राष्ट्रिय टिमका लागि भने जति योगदान गर्न पेड्री तयार छन् । तर त्यसअघि उनलाई चाहिएको छ, ब्रेक ।
एमबाप्पेको सरुवा चर्चा प्रत्युत्पादक : डेशच्याम्पस